Shiinaha SARS-CoV-2 Antigen Soosaarayaasha Degdega ah iyo Badeecadaha | Liming Bio
Tallaabada®SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test waa baaritaan dhaqso ah oo loogu tala galay baaritaanka COVID-19 antigen ee virus-ka SARS-CoV-2 ee bararka bini'aadamka Cunaha / Nasopharyngeal. Baaritaanka waxaa loo adeegsaday gargaar asan oo lagu ogaanayo COVID-19.
Riwaayadaha cusub ee loo yaqaan 'coronaviruses' waxaa iska leh gen. COVID-19 waa cudur daran oo faafa oo ku dhaca neef mareenka. Dadku guud ahaan waa u nugul yihiin. Xilligan, bukaannada uu ku dhacay cudurka 'coronavirus' cusub ayaa ah isha ugu weyn ee laga helo infekshanka; dadka qaba cudurka asymptomatic sidoo kale waxay noqon karaan ilo faafa. Iyada oo ku saleysan baaritaanka cudurrada faafa ee hadda jira, muddada cudurku waa 1 illaa 14 maalmood, badiyaa 3 ilaa 7 maalmood. Astaamaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qandho, daal iyo qufac qallalan. Ciriiriga sanka, sanka oo dareera, cune xanuun, myalgia iyo shuban ayaa lagu arkaa dhowr xaaladood.
Tallaabada 'StrongStep'®Tijaabada 'SARS-CoV-2 Antigen Test' waxay ka shaqeysaa qalabka baaritaanka socodka chromatographic lateral lateral qaab cajalad ah. Latex conjugated antibody (Latex-Ab) oo u dhiganta SARS-CoV-2 ayaa qalalan-dhaqaaq ku ah dhammaadka xuubka xuubka nitrocellulose. Unugyada difaaca jirka ee SARS-CoV-2 waxay ku xidhan yihiin aaga tijaabada (T) halka Biotin-BSA ay ku xidhan yihiin aaga kontoroolka (C). Marka muunadda lagu daro, waxay u guurtaa kala-furfurnaanta fuuq-celinta ee fuuq-celinta conjugate latex. Hadday ku jirto muunad, SARS-CoV- 2 antigens waxay ku xirnaan doontaa unugyada difaaca jirka ee ugu yar ee isku dhafan. Qaybahaani waxay sii wadi doonaan inay u haajiraan dariiqa illaa aagga tijaabada (T) halkaasoo ay ku qabtaan SARS-CoV-2 unugyada difaaca jirka iyagoo soo saara khad cas oo muuqda. Haddii aysan jirin anti-SARS-CoV-2 antigens-ka muunad ahaan, xariiq guduudan lagama sameyn doono Aagga Imtixaanka (T). Isku-xidhka 'streptavidin conjugate' wuxuu sii wadi doonaa inuu kaligiis u haajiro illaa laga soo qabto Aagga Xakamaynta (C) ee isku xidhka Biotin-BSA ee safka, taas oo muujinaysa ansaxnimada tijaabada.
20 Qalabka shaqsi ahaan loo buuxiyo
Qalab kasta wuxuu ka kooban yahay xariijimo ay kujiraan isku xidhayaal midab leh iyo reagent falceliyayaal ah oo horay loogu faafiyey reqions u dhigma.
2 Fijaan-soo-saarista Buugga
0.1 M Fosfate ayaa cusbay cusbada (P8S) iyo0.02% sodium azide.
20 Tuubooyinka wax soo saarista
Tijaabooyinka tijaabada isticmaalka.
1 Goobta Shaqada
Meel lagu xareeyo fijaannada wax lagu keydiyo iyo tuubooyinka.
1 Xidhmada Xidhmada
WAXYAABAHA LOO BAAHAN YAHAY LAAKIIN LAMA SIIN
Saacad Waqtiga isticmaalka.
Cunaha / Nasopharyngeal suufka Qaadista muunada
Qalabkan waxaa loogu talagalay IN lagu isticmaalo baaritaanka IN VITRO oo keliya.
Qalabkan waxaa loogu talagalay Isticmaalka Xirfadleyda Caafimaadka Kaliya.
Si taxaddar leh u aqri tilmaamaha intaadan imtixaanka sameyn.
Badeecadani kuma jirto wax laga helo ilaha aadanaha.
Ha isticmaalin waxyaabaha ku jira xirmada ka dib taariikhda uu dhacayo.
U qaado dhammaan tijaabooyinka sida cuduro faafa.
Raac nidaamka caadiga ah ee sheybaarka iyo tilmaamaha nafsaaniga u ah maaraynta iyo ka takhalusidda waxyaalaha faafin kara. Markii hawsha tijaabada la dhammaystiro, ku tuur tijaabooyinka ka dib markii aad ku xirto 121 ℃ ugu yaraan 20 daqiiqo. Haddii kale, waxaa lagu daaweyn karaa 0.5% Sodium Hypochlorite afar saac ka hor intaan la tuurin.
Ha ku darin bakeerigaag afkaaga ha ku cabbin sigaar hana cunin inta aad tijaabooyinka ku guda jirto.
Xidho gacno gashi inta hawshu socoto oo dhan.
Boorsooyinka xiran ee xirmada tijaabada waxaa lagu keydin karaa inta udhaxeysa 2 - 30 ℃ inta lagu gudajiro nolosha shelf sida ku cad boorsada.
Uruurinta iyo kaydinta khaaska ah
Muunada Suufka Nasopharyngeal: Waa muhiim in la helo qarsoodi inta ugu badan ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, si loo soo ururiyo muunad Nasopharyngeal Swab ah, si taxaddar leh u geli Suufka nadiifka ah sanka sanka kaas oo soo bandhigaya waxyaalaha ugu badan ee ku hoos jira kormeerka muuqaalka. Ka ilaali suufka agagaarka sagxada sanka iyadoo sanka si tartiib ah ugu riixeyso nasopharynx dambe. Wareeji Suufka dhowr jeer. Qoorta cunaha: Ku cadaadi carrabka qori caaradeed ama qaaddo. Markaad suuxinayso cunaha, ka taxaddar in aad taabato carrabka, dhinacyada ama dusha sare ee afka. Ku xoq Suunka dhabarka cunaha, qumanka iyo meel kasta oo kale oo ay ku taal casaan, caabuq ama malax. Isticmaal suufka suufka leh ee feeraha si aad u soo ururiso tijaabooyinka. Ha isticmaalin kaalshiyam-ka alginate, suuf dhadhamin ama suuf alwaax ah.
Waxaa lagugula talinayaa in tijaabooyinka suufka lagu farsameeyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib ururinta. Suumanka waxaa lagu hayn karaa tuubo caag ah oo nadiif ah, qalalan ama shaati ilaa 72 saacadood heerkulka qolka (15 ° C ilaa 30 ° C), ama la qaboojin karo (2 ° C ilaa 8 ° C) kahor howsha.
Keen tijaabooyinka, tijaabooyinka, keydka iyo / ama kontaroolada heerkulka qolka (15-30 ° C) kahor isticmaalka.
1. Dhig tuubo soo saarid nadiif ah meesha loogu talagalay in lagu shaqeeyo. Kudar 10 dhibcood oo Buffer Extraction tubbada soo saarida.
2. Ku dhaji suufka tuubada. Si adag u walaaq xalka adoo wareejinaya suufka gabi ahaanba dhanka tuubada ugu yaraan toban jeer (inta uu quusayo) .Natiijooyinka ugu fiican ayaa la helaa marka muunada si xoog leh loogu qaso xalka. U oggolow suufku inuu ku qoydo Buugga Bixinta muddo hal daqiiqo ah ka hor Tallaabada xigta.
3. Isu ururi inta dareere ah ee suurtogalka ah suufka adoo ku dhajinaya dhinaca tuubbada soo saarida dabacsan sida suufka looga saarayo. Uguyaraan 1/2 ee xalka saambalka saamiga waa inuu kujiraa tuubada si ay udhacdo qulqulka kufsiga ee kufilan. Furka saar tubbada la soo saaray. Ku tuur suufka weelka qashinka halista ah ee halista leh.
4. Muunadaha la soo saaray waxay ku hayn karaan heerkulka qolka 60 daqiiqo iyaga oo aan saameyn ku yeelan natiijada baaritaanka.
5. Ka qaad baaritaanka kiishkiisa xirmay, kuna rid meel nadiif ah oo siman. Calaamadee aaladda bukaanka ama aqoonsiga kantaroolka. Si loo helo natiijada ugu fiican, baaritaanka waa in lagu sameeyaa hal saac gudahood.
6. Kudar 3 dhibcood (qiyaastii 100 µL) oo muunad laga soosaaray tuubada soo saarista ah saamiga si fiican ugu duub cajaladda tijaabada. Ka fogow inaad ku xirto goobooyin hawo ah shaybaarka si fiican (S), hana ku daadinin wax xal ah daaqadda daawashada. Markuu imtixaanku bilaabmayo inuu shaqeeyo, waxaad arki doontaa midab dhaqaaqa xuubka.
7. Sug inta band (yada) midabada leh ay soo muuqanayaan. Natiijada waa in la aqriyaa 15 daqiiqo.
Ha fasiran natiijada 20 daqiiqo kadib. Ku tuur tuubooyinka tijaabada ee la isticmaalay iyo Cajaladaha Imtixaanka weel qashin ah oo khatar ah.
NATIIJO CAADI AH Laba qaybood oo midabbo leh ayaa u muuqda 15daqiiqo gudahood. Hal guuto oo midab leh ayaa ka soo muuqanaya Aagga Xakamaynta (C) iyo midab kale oo midab leh oo ka muuqda Aagga Imtixaanka (T) Natiijada baaritaanka waa mid sax ah oo ansax ah. Si kasta oo ay u muuqato jilicsanaanta kooxda midabka leh ee Aagga Imtixaanka (T), natiijada baaritaanka waa in loo tixgeliyaa inay tahay natiijo wanaagsan.
NATIIJADA GANACSIGA Hal guuto oo midab leh ayaa ka soo muuqanaya aagga kontoroolka (C) 15 daqiiqo gudahood. Ma jiro koox midab leh oo ka muuqata Aagga Imtixaanka (T). Natiijada baaritaanka waa mid taban oo ansax ah.
NATIIJADA BULSHADA Ma jiro koox midab leh oo ka soo muuqanaysa Aagga Xakamaynta (C) 15 daqiiqo gudahood. Natiijada baaritaanka waa mid aan ansax ahayn. Ku celi imtixaanka qalab tijaabo ah oo cusub.
1. Tijaabadu waa ogaanshaha tayada ee anti-SARS-CoV-2 antigens-ka ku jira bini-aadamka Cunnada / Nasopharyngeal suufka iyo qiyaasta ma muujineyso tirada antigens-ka.
2. Baaritaanka waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo baaritaanka fitamiinada oo keliya.
3. Sida ay tahay dhammaan tijaabooyinka ogaanshaha cudurka, baaritaanka caafimaad ee kama dambaysta ah waa inuusan ku saleysnayn natiijada hal baaritaan laakiin waa in la sameeyaa ka dib marka la qiimeeyo dhammaan natiijooyinka caafimaad, gaar ahaan ku xirnaanta baaritaanka SARS-CoV-2 PCR. 4. Dareemida tijaabada RT-PCR ee ogaanshaha COVID-19 kaliya waa 30% -80% sababo laxiriira tayada tusaalaha liita ama waqtiga cudurka xiliga wajiga laga soo kabanayo, iwm. hoose sababta oo ah Habka ay.
Maya. 12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR China.
Fakis: (0086) 25 85476387
Taageero farsamo: poct_tech@limingbio.com
Waraaqaha 'Antigen Rapid Test' (20200713)
Qalabka COVID-19 Antigen
Xiga: Qalabka Nidaamka Biyosafety-ka ee loogu talagalay SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen,